Indawo yangoku yeBaca Railyard Trailhead kufutshane neDolophu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSolange + Andres
Igumbi langoku, elixhotyiswe ngokupheleleyo kwisakhiwo seTrailhead kwiSithili saseBaca eSanta Fe Railyard. Kufuphi nedolophu, kusekwe kwisakhiwo esihle esitsha semizi-mveliso yanamhlanje esinendlu entle yekofu kunye nevenkile yokutyela “Cafecito” kanye kwizakhiwo.
Thatha umkhondo kwaye uhambe okanye ukhwele ibhayisekile ngqo kwi-New Underpass Acequia trail kwaye ungene edolophini ngemizuzu eyi-15, kufutshane ne-Wholefoods, uMrhwebi uJoe kunye neMeow Wolf.
“Apha kwi-Trailhead Santa Fe injongo yethu kukubonelela ngendawo enkulu yexesha lakho eSanta Fe.”
- Solange + Andres, umbuki zindwendwe wakho
I-King bed, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.95 (iingxelo zokuhlola 214)
Le ndlu ibekwe kwisakhiwo esitsha semizi-mveliso esisetyenziselwa izinto ezininzi kwiSithili saseBaca eSanta Fe Railyard. Yonwabele iCafecito, indawo enkulu kwizakhiwo. Ngeegalari zobugcisa kunye nepaki kwakhona inxalenye yesayithi. Ngebhayisekile kwaye uhambe ukusuka kwiSayithi iSanta Fe ngokuthe ngqo kwiNdlela entsha ye-Underpass Acequia.
Kukho ulwakhiwo oluqhubekayo malunga nommandla weSithili saseBaca Railyard, kwaye nangona iintsuku ezininzi zingenasiphelo, ngamanye amaxesha ukusetyenziswa koomatshini kunokubangela ingxolo emini.
Umgama ukusuka eSaint Vincent Hospital
imizuzu eyi-9 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Solange + Andres
USolange + Andres yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 156983
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santa Fe